Sida loo Kordhiyo Fursadda E-maylkaaga ee aad ku soo gasho Santuuqa | Martech Zone
Talaado, September 9, 2014 Talaado, September 9, 2014 Douglas Karr
Dad badan ma oga in farqi weyn u dhexeeyo gaarsiinta emaylka oo run ahaantii ka dhigaysa sanduuqa. Awoodda adeeg-bixiye adeeg bixiye si uu u gaarsiiyo emaylkaaga waxaa lagu sifeeyay oo lagu cabiray wax-qabad. Laakiin taasi kaliya waxay ka dhigan tahay inay jirtay gacan ka hadal u dhexeeya server-yada in emailkaaga la aqbalay. Taas macnaheedu maaha inay hadda ku jirto sanduuqa macaamiishaada. Maaha wax aan caadi ahayn in emaylku yeesho 100% gaarsiin iyo 0% meelaynta sanduuqa… oo ay la socdaan dhammaan emaylladaada oo tagaya galka spam. Waxaad ubaahantahay qalab qalab sida Xog-ogaal Inbox ka yimid kafaala qaadayaasheena at 250ok si aad u aragto sida aad wax uga qabanayso arrintaas.
Markaad email u dirto meheraddaada, waxaad filaysaa inay si fudud uga muuqan doonto sanduuqyada macaamiishaada, sax? Hagaag, waxaa jira waxyaabo badan oo badan oo ku saabsan helitaanka emayl ka badan inta aad filan karto. Email Bixiyeyaasha Adeegga (ESP), sida VerticalResponse, wax badan samee si aad u hubiso in iimaylkaagu ka dhigayo sanduuqa, laakiin qayb ayaad ka ciyaartaa gudbinta, sidoo kale. Shaxdan infographic-ka ah waxay qeexaysaa qiyaasta iyo waxayaabaha ay tahay inaad raacdo si ay kaaga caawiso emaylladaadu inay ka dhigaan sanduuqa, halkii ay ka ahaan lahaayeen faylka baqdinta leh ee Spam-ka.
Kuma lihi heshiis guud oo dhan talooyinka ku jira sawir-gacmeedkan. Markii aan u shaqeynayay Adeeg Bixiye Email, mar walba waxaan sameyn jirnay talooyin isku mid ah; si kastaba ha noqotee, ka dib markii aan ka tagnay oo aan la tashanay ganacsiyo badan, waxaan aragnay shirkado badan oo si xoog leh u adeegsanaya liisaska seddexaad iyo adeegsiga istaraatiijiyooyin soo jiidan kara xanaaqa ku dhowaad qof kasta oo la-taliye u ah Adeeg Bixiye Email. Si kastaba ha noqotee, waxaan aragnay iyaga oo aan kaliya helin natiijooyin waaweyn, markii si wanaagsan loo fuliyay meelayntooda sanduuqa iyo cabashooyinka SPAM kama duwana shirkadaha aan ahayn kuwa dagaal badan.
Waxaan kula dhex galnay joornaalkeenna gaarka ah. Si buuxda ayaa loo geeyay dhowr bilood, waxaan u wareejinay bixiyeyaasha adeeg bixiye caan ah email waxayna isla markiiba diideen liistadeena iyagoo wata liistada magacooda super-duper… nidaam lahaansho ay qof walba ugu suuq geyn jireen sida ugu fiican. Waxay codsadeen inaanu dirno farriin cusub oo aan ka codsanno in macmiil kastaaba ka-xusho liiska mar kale. Marka… waxay doonayeen inaan soo dirno xiriir kale oo emayl ah ka dib markii aan mar horeba fasax helnay - maya!
Waanu murminay ilaa ay ESP noo ogolaatay inaan u dirno liiskeena (maya - ma ahayn VerticalResponse). Waxaan u dirnay liiska… mana jirin wax cabasho ah oo la duubay. Waa inaad xusuusnaataa in ESP kasta uu leeyahay adeegeyaal u gaar ah oo leh sumcad ay tahay inay ilaaliso qiimo kasta. Taasi waxay ka dhigan tahay inay had iyo jeer ku khaldami doonaan dhinaca halista eber. Nasiib darrose, ganacsiyada inta badan kuma shaqeeyaan jawi khatar la'aan ah.
Kuma talinayo dadka BADBAADINTA dadka aadan xiriirka la lahayn. Kaliya inay jiraan meelo cirro leh oo aad layaabi karto inaad si fiican u shaqeyso.
Tags: laba jibbaar ahgaarsiinta emaylkadirista emaylkainta jeer ee emaylkawarbixinta emaylkaqaybinta emaylkais-qoritaanka emaylkamailkoodadooran inspamUnsubscribejawaab toosanjawaab celinSoo dhawow emailka
Daahfurnaan waa ikhtiyaari, sax ahaanshuhu maahan